Laga bilaabo Excel ilaa AutoCAD, Dhawaaq fudud - Geofumadas
Maarso, 2009 AutoCAD-AutoDesk, topografia
Waxaan horey uga hadalnay mowduucan horay, xaqiiqda, waxaan lahaaWaxaan ku soo koobayaa qoraal kooban ugu fiican, laakiin Anigu ma aan awoodin in ay ka fogaadaan jirrabaadda in ay ka hadlaan version a super fudud in kor ahayd madal user Cartesia maanta oo kaliya.
Waa isbiriidhshiit Excel fudud oo tiirar waayo xogta, magaca dhibic iyo xyz isuduwaha, haboon dhibcood maaraysay kiciyey saldhigga guud ahaan ay ku jiraan txt a kala hakadka. Sida had iyo jeer, macros isagoo loo baahan yahay in la karti.
Waxaa suurtagal ah in la dhiso qaar ka mid ah xuduudaha aasaasiga ah sida midabada, cabbirka qoraalka, haddii sare loo qaado.
Waxyaabaha sahlan ee ku saabsan arjigaan waa in ay u diraan macluumaadka si toos ah sida sheyga Ole, sidaas darteed waxaad leedahay oo keliya AutoCAD furan, nooc kasta oo mesh mashiinka la dhisay. Abuuri dhibcaha, qawaaniinta iyo qoraallada ku jira lakab gooni ah.
Waxay u baahan tahay aragti dhamaystiran oo lagu muujinayo dhammaantood, dhibcooyinka ay la socdaan z iyo qoraallada waxay ku jiraan heerka sare ee 0.
Xiisaha, xitaa koodka lama ilaaliyo si aad u barato sida loo dhisay.
Waxaan isku dayay xogta aan mar kale u isticmaalo dhisaan wareegyada heerka iyada oo la adeegsanaayo AutoCAD Macaamiisha 3D waxayna dhab ahaantii shaqeyneysaa. Tag halkaas oo soo qaado si markaas ka dibna aysan haysan sir ah, waxay u baahan tahay in laga diiwaangeliyo forum Cartesia.
Post Previous«Previous Manifold GIS 9 ... dhakhso ah
Post Next Microstation V8i: Hagaajinta HawlahaNext »
8 jawaabta "From Excel ilaa AutoCAD, Dhibaato Marna"
sideen u helayaa
diyaarad diyaaradeed oo ku salaysan kombuyuutar, kaas oo ku jira falanqaynta sawirada,
marka aan u furo baska macaan, ma arko foomamka,
qof ayaa i caawin kara
Halkan waa soo koobid
iyo halkan waxaa ku jira shaababyo laga sameeyey Excel
Xagee ayaan ka heli karaa macluumaad dheeraad ah ama buug-yaraha mawduucan ee isku xiraya farsamada iyo autocad?
Daniel Sepúlveda isagu wuxuu leeyahay:
Dhamaanba, waad ku mahadsan tahay bogga,
Hadda waxaan raadineynaa hab lagu yareeyo sifooyinka walxaha leh macluumaadka iyaga ka yimid autocad, tusaale ahaan
Xawaaraha iyo Socodka dhibic (Excel) ka dibna Autocad, ee sifooyinka isku mid ah waxay u muuqdaan xogta.
giovanny isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan doonayaa nuqul ka mid ah barnaamijyadan yar yar -Waxay tahay $ doolar qiimo ahaaneed iyo sida aan u joojiyo _________
Ku biir dhibcaha? waa dhibco dhibco ah, maxaad uga jeeddaa adigoo ku biiraya dhibco?
Alexander Duque isagu wuxuu leeyahay:
Saludos qalab this helay fiican !!!, boodhadhka bogga iyo, baahnayn in la yidhaahdo !!!, waa dad aad u fiican inay naga caawiyaan si, Anigu waxaan ahay arday halkan Colombia Construcciones Civiles, si aad u wanaagsan u shaqaysay cadeeyo oo aan jeclaan lahaa in la ogaado:
1) aad ku xidhan karto dhibcaha iyo in ay Acad, aanan ka arki karin link in i qaadi lahaa haddii uu jiro tuto halkan ha.
Waa su'aal keliya oo aniga iyo dad badan oo mahadsan.